हामी नेपाललाई माया गर्छौँ– सुदक्षिणा भट्ट-Brtnepal.com
गत वर्ष रक्की माउन्टेन फ्रेन्ड्स् अफ नेपाल (कोलोराडो) द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगितामा पहिलो स्थान प्राप्त निबन्ध !
पूर्वको मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्म, उत्तरको हिमालय देखी दक्षिणको समथर भूमिसम्म फैलिएको हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो देखिएपनि यहाँ रहेका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाहरुले नेपाललाई संसारको अगाडि महान् बनाएको छ। विश्वको सबै भन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा देखी तिलिचो, राराताल, माछापुछ्रे, फेवाताल, चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र अन्नपूर्ण पदयात्रा जस्ता द्रिस्यहरुको बयान गरेर साध्य छैन। सूर्यउदय र सुर्यास्तको सजिलैसँग द्रिस्यावलोकन गर्न सकिने ईलामको श्री अन्तु हिलको दृश्यले कसको चाहिँ मन प्रफूल बनाउदैन होला र? त्यस लगायत नदी नाला, झरना, हिमालयको सौँदर्य, बहुमुल्य जडीबुटी, विश्वमै दुर्लभ एक सिङे गैँडा, अर्ना, पाटेबाघ, डाफे लगायत सयौ किसिमका पुतलीहरु हाम्रै बन्जंगलमा देख्न सकिन्छ । यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरुले नेपालीहरूलाई मात्र नभई विश्वलाई नै लोभ्याएको छ।
विभिन्न सम्पदाहरु मात्र नभएर नेपालमा खाने कुरा देखी लगाउने लुगा सम्मको छुट्टै महत्त्व छ । नेपाली दाल-भातको स्वादलाई कुनै पनि विदेशी खानाले जित्न सक्दैन र मो:मोको अगाडि पिज्जा र बर्गरको केही सीप लाग्दैन। त्यसै गरी विदेशी कपडाहरुले कहिल्यै पनि परम्परागत र राष्ट्रिय पोशाकहरुको आनन्द दिँदैन। हामी नेपाली हौँ र हामीलाई आफ्नो चालचलनको मान् राख्न राम्रोसँग आँउछ र त्यस्तो कुरा हामीले भुलेर पनि भुल्न हुन्न । जसरी हामीलाई हाम्रो बाउ-बाजेले धर्म, संस्कृति, र परम्परा सिकाएका थिए त्यसरी नै हामीले पनि आउदो सन्ततिलाई सिकाउन सक्नु पर्छ। त्यही बाट नेपालीहरूको मान् र सान् सधैँ जिउँदो हुन्छ।
नेपालमा राजनीतिक अवस्था ठिक छैन र त्यही कारणले कयौँ नेपालीहरू आफ्नो देश छोडेर विदेशीन परेको छ। यदि नेताहरूको दिमाग ठिक ठाउँमा आएर आफूआफू मात्र नभनि हामी हामी भनेर नेपालको विकास गर्न तर्फ लागे भने नेपाललाई विकसित हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामीसँग स्रोतको कमी छैन तरपनि नेताहरूको तँछाड् र मछाड्को खेलले अहिलेसम्म नेपाललाई विकसित पार्न भने सकेको छैन। तर जे छ, जस्तो छ, मलाई मेरो नेपाल नै प्यारो लाग्छ र मलाई विश्वास छ कि एक दिन हामी सबैले नेपाल विकसित भएको देख्न पाउने छौँ। यी सबै कुराहरूले गर्दा मेरो मनबाट नेपालको लागि माया कहिल्यै कम हुँदैन । म जता छु, जे गर्दै छु, म गर्वको साथ भन्छु कि म नेपाल कि छोरी हुँ र म नेपाललाई आफू भन्दा पनि धेरै माया गर्छु ।
Published on June 30, 2017 at 5:30 pm